Thandwe Izindawo Eziqashwayo Zeholide & Amakhaya - Rakhine, Myanmar | Airbnb
Vacation rentals in Thandwe
Izindawo eziqashwayo zeholide ezinconywa kakhulu e- Thandwe
Ikamelo lase hhotela · Izivakashi ezingu- 3 · imibhede engu-2 · Amagumbi okugeza angu-1.5
“Indawo iyamangalisa! Le ukuphela kwendawo elula ongayithola ebhishi e-Ngapali, kanye nokusekelwa komqondo wemvelo kanye namaphrojekthi wokuthuthukisa umphakathi. Uma ungeyena umuntu osebenzisana naye noma ehhotela lena yindawo yakho. Amakamelo abanzi kakhulu futhi enelanga, zonke zenziwe ngokhuni (izithombe azikhombisi ukuthi muhle kangakanani) futhi iningi lazo linendawo enkulu yokubuka olwandle nokubuka ulwandle. Ukudla kuhle futhi kunempilo, kukhonzwa ngqo ebhishi futhi abasebenzi bahlala bemamatheka. Uthandile ukuxubeka kokuthinta kwe-european kweminye imininingwane ngomusa weqiniso wase-birmanian. Ngiyabonga ngakho konke!”
SUPERHOSTI-villa yonke · Izivakashi ezingu-16+ · imibhede engu-15 · Amagumbi okugeza angu-10
Kusuka ku- $1,399 / ubusuku
Amasevisi athandwayo ase- Thandwe ezindawo eziqashwayo zeholide
Ezinye izindawo ezinhle eziqashwayo zeholide e- Thandwe
Ikamelo lase hhotela4.59 (22)